About Us - Qingdao JBD milina Co., Ltd
Qingdao JINBEI milina Co., Ltd. (antsoina koa hoe Qingdao JBD milina Co., Ltd) dia feno orinasa fampidirana fikarohana siantifika sy ny fampandrosoana, orinasa mpamokatra entana, teknolojia fanavaozana (fifampidinihana), famokarana sy ny fivarotana. Tsy nifidy fampandrosoana ny "hitsangana ny kalitao, hanana ny teknolojia, fanao aloha" hatrizay nanaovana ny orinasa. Ny orinasa locates amin'ny tanàna tsara tarehy Qingdao, faritanin'i Shandong, China.The mety tsara tarehy ny fifamoivoizana sy ny toerana tsara tarehy mandray antsika hahasoa ny fampandrosoana. Noho ny fanohanana maro be mpanjifa sy ny namana, ny orinasa dia hampivelatra haingana, ary efa namorona vondrona orinasa amin'ny fikarohana siantifika, fanamboarana, ny varotra sy ny debugging.
Fanitarana ny tsena raharaha
Famoronana sy ny zava-baovao foana ny toe-tsaina fototra JINBEI ny kolontsaina. Nanomboka tamin'ny fiorenan'ny JINBEI, dia mbola lalana ny asa nanirahana ny angovo maitso. Mandrakariva isika mikiry avo lenta, ambany ny fako sy ny loto ambany.
Innovation Technical toro-hevitra
Dia manolotra kevitra amin'ny zavatra takiana manaraka ireto.
Mpanolo-tsaina ara-teknika mba hanomboka vaovao fototra / tetikasa
Mpanoro hevitra ara-teknika sy ny fanohanana ny fampidirana ny zavamaniry sy milina sy ny fanirahana nahomby
Consulting ara-teknika ho an'ny fampandrosoana ny vokatra vaovao
Omeo Technical Training
Complete amin'ny lafiny telo fanombanana ny asa eo amin'ny fototra sy milina hampihenana anatin'ny masonkarena
Izahay voalohany indrindra isan-karazany safidy ny mpanjifa noho ireto antony ireto:
Wide distribution mampahahendry Network
Etika raharaham-barotra nataony
Be kevitra experiance
Qingdao JINBEI milina Co., Ltd
Ampiana hoe: No.15 Guangdong Road, Beiguan indostria Park, Jiaozhou City, Qingdao, Sina